सुरक्षा घेरामा ‘शत्रुगते’
बागबजारको हार्दिक होटल, जहाँ ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्रको कार्यालय छ, अक्सर म त्यहाँ पुग्ने गर्दछु । यहाँ पुग्नुको मज्जा अर्को पनि छ, पुराना साथीहरु भेटिन्छन् जो पार्टी सरकारमा पुगेपनि आफु सांसद वा मन्त्री
मैले चौपायाको मासु खान छोडेको चारबर्ष र दोपाया छोडेको दुईबर्ष भएछ । ‘नो-पाया’ औंशी पुर्णिमामा चल्छ तर त्योपनि अरु बेला नो थ्याङ्स ! नो-पाया भनेको जसको पाउ हुन्न अर्थात् माछा, अण्डा आदि
धुर्मुसलाई सिध्याउने उपायको खोजीमा…..
‘धुमुर्स उमेर र नाताले भाइ हुन्, कला र कर्मले साथी हुन्, योगदान र सेवाले अग्रज हुन् ।’ यसो भन्दा मलाई गर्व लाग्छ । धुर्मुस सुन्तलीको जोडीले चार वटा बस्तिको सफल
‘उस्तै लाग्ने प्लास्टिकका चामल यसरी चिन्नुहोस् ।’ -खाद्य भिबाग
काठमाण्डौमा प्लास्टिकका चामल बिक्रेता पक्राउ परेपछि खाद्य भिबागले सबैलाई सचेत रहन सुझाव दिएको छ । धानकै चामलजस्तो देखिने प्लास्टिकको चामल मानव स्वाश्यकालागि निकै हानिकारक मानिन्छ । भिबागले चामल किन्दा सक्कली
दार्जिलिङ आन्दोलन सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री
देउवा सरकार, नीजि सचिवालय काठमांडु, नेपाल । बिषय: दार्जिलिङ आन्दोलन सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री । उपरोक्त बिषयमा हाल दार्जिलिङमा चलिरहेको आन्दोलनप्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यहाँ दुई नेपालीभाषी मारिएकोमा हामी झनै मर्माहत
मुसहर बस्तीभन्दा ठुलो आयोजना : चुपचाप हस्तान्तरण
भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको निकै चर्चा भयो । त्यसपछि एक्लै वस्ती बनाउने धादिंगका दिनेश तामांग चर्चित भए । तर, यी भन्दा ठूला आयोजनाहरु हल्लाखल्ला बिनै निर्माण सम्पन्न भएकाछन्
१.मार्क्सबाददेखी मासुभातसम्म डा. बाबुराम भट्टराईलाई मार्क्सबादका पुजारी तथा माओवादका पण्डित मानिन्थ्यो । तर एक्कासी दुबै बिचारलाई अचार बनाएर नयाँ शक्ति बिचारधारा धारणा गरेपछी उनी ‘गज्जब ब्यक्ती अफ द ईयर बन्न
नेपाल शहीद प्रधान देश हो । यहांका अधिकांस पार्टीहरु शहीदमा निर्भर छन् । तिनको आम्दानीको मुख्य श्रोतपनि शहीदको खेती नै हो । एक पटक लगाएको शहीदले पुस्तौं पुस्तासम्म खान पुग्दछ
लोकमान लड्दा यी लोकतन्त्रबादीले किन डाँको छोडे !
‘लोकमान चैट्’को समाचार पढ्दै एउटा जनता डाँको छोड्दै थिए, छाती पिटि पिटि सहयोग माग्दै भगवानसँग हात जोड्दै थिए । मैले भनें, न्यायालयको निर्णय हो यो, स्वीकार्नु पर्छ, ढोग्नु पर्छ ।
‘फाल्नु भएको खैनी हैन, ईज्जत हो ।’ -मन्त्रीज्यूको जीनि सचिवालय
शहरी विकासमन्त्री अर्जुन तर्सिंंह केसीको जीनि सचिभाालयले ‘खैनी काण्डको’ खण्डन गरेको छ । आजको संसद बैठकमा मन्त्री केसीको अस्वाभाविक भिडियो भाईरल बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा महाप्रलय आएको थियो । प्रलयलाई रोक्न